China yakaoma enamel fekitori uye vagadziri | Kingtai
Kana iwe wakambodzidza kugadzira ako enamel pini, iwe ungangodaro wakasangana nemazwi "akaoma enamel" uye "akapfava enamel." Ini ndinofunga vanhu vazhinji vane iwoyu mubvunzo mumwechete: Ndeupi musiyano uripo pakati pezviviri? mutsauko pakati peiyo enamel yakaoma uye yakapfava enamel ndiwo maratidziro echinhu chakapedzwa.Hard enamel pini dzakatsetseka uye dzakatsetseka, zvine mavara akanaka kuratidza. Iyo yepamusoro haina waya, uye iyo simbi kumucheto kwezvinyoro enamel pini iri convex.
Nguva yekutora Hard Enamel Zvakaoma enamel pini zvinogara zvakasimba uye kukwenya-kusagadzikana zvichienzaniswa neyakareruka enamel. Vanhu vazhinji vanosarudza yakaoma enamel pane yakapfava enamel nekuda kweiyo yakachena, yakapera kutaridzika. Mazhinji magadzirirwo anogona kushanda mune ese akaomarara uye akapfava enamel, saka kazhinji yenguva yacho inosvika pasi pane zvaunofarira. Mapini akaomarara enamel anotanga kuzadzwa nemuvara, ipapo kumeso kwepini kwakatsikirirwa pasi kuti kuve kwakatsetseka uye kwakatsetseka. Kukuya nekukorobha kunoita kuti zvisaenderane nezvimwe zvinopedzisa simbi. Kana iwe uchida yakajairwa goridhe kana sirivheri simbi yakanamirwa pamadziro, ipapo rakaomarara enamel inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune yako dhizaini.
Zvakaoma enamel pini zvinogara zvakasimba uye kukwenya kusagadzikana pane zvakapfava enamel pini.
Vanhu vazhinji vanosarudza yakaoma enamel pane yakapfava enamel nekuda kweiyo yakachena uye yakajeka chitarisiko.
Mazhinji magadzirirwo anowanikwa pane ese akaomarara uye akapfava enamel, saka kazhinji yenguva inoenderana nezvinodiwa nemunhu.
Iyo yakaoma enamel pini inotanga kuvezwa uye kumeso kwepini kwakatsetseka.
Kukuya nekukorobha kunoita kuti zvisawirirane nedzimwe nzvimbo dzesimbi.
Kana iwe uchida yakajairwa goridhe kana sirivheri simbi yakanamirwa pamoto, yakaoma enamel isarudzo yakanaka kune yako dhizaini.
Kune akaomarara enamel, iyo enamel inowedzerwa isati yaiswa plating, iyo enamel inowedzerwa nekukwenenzverwa zvakapfava kusvika padanho rakaenzana nesimbi kufa mitsara. Ruvara roga roga runofanira kubikwa muchoto chimwe nechimwe chinowedzera mukuita uye mutengo. Kamwe kana ese mavara awedzerwa ipapo bheji rinogona kusarudzwa uye kukwizirwazve kuti upedze bheji. Iyo yakawanda polishing maitiro ndosaka iyo bheji ichigona kuwana zvishoma zvishoma zvishoma pane yakapfava enamel uye nei dzimwe tambo dzesimbi dzingangopararira mukugadzira uye kuve dzakakora kupfuura dhizaini yekutanga. Yedu yakaoma enamel maitiro ndeyechimanje manje maitiro echinyakare akaoma enamel maitiro uye musiyano mukuru pakati pedu zvakaoma enamel ndiyo chaiyo enamel.
Kune yakaoma enamel, wedzera enamel usati wasarudza electroplating uye wozora kune imwe ndege seyesimbi mutsara. Ruvara roga roga runofanira kubikwa rimwe nerimwe muchoto, mukutsvaga mhando yepamusoro asi yakawedzera maitiro ekugadzira uye mutengo. akawedzera, ipapo bheji rinogona kuiswa uye kukwidziridzwa zvakare kupedzisa bheji.Zvakatora yakawanda kupukuta kuitira kuti bheji riwane zvishoma zvishoma pane yakapfava enamel, uye nei dzimwe tambo dzingave dzakapararira mukugadzira uye dzakakora kupfuura Dhizaini yedu yakaoma enamel maitiro ano, musiyano mukuru pakati pechinyakare enamel maitiro uye yedu yakaoma enamel ndiyo chaiyo enamel.
Pashure: Vhenekera murima Lapel Pins
Zvadaro: Hinged Lapel pini
Dhijitari Kudhinda pini